NFPဒေတာနှင့် အမေရိကန် အလုပ်သမားဈေးကွက်ဒေတာ
လတိုင်း၏ ပထမဦးဆုံးသော သောကြာနေ့တွင် NFPဒေတာနှင့်အတူ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ဒေတာနှင့် နာရီအလိုက် လုပ်ခလစာဒေတာများကိုပါ ထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါသည်. သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထရိတ်ဒါများက ထိုအချိန်ကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. အမေရိကန်ဒေါ်လာ အားကောင်းနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် EUR/USD နှင့် USD/JPYအတွဲများတွင် ပိုမိုအလှုပ်အခတ်များနိုင်ပါသည်.
ဤဒေတာအဘယ်ကြောင့် အားကောင်းရသလဲဆိုရင် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးမူဝါဒများအပေါ် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါသည်. ဈေးကွက်က NFPဒေတာနှင့် ပျမ်းမျှအချိန်ပိုင်းအလိုက် ၀င်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုဒေတာများကို သတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. ဒေတာထုတ်ပြန်မှုမှာ ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားသည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်ခဲ့ပါက အားကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး USDအားကောင်းနိုင်တာ ဖြစ်ပါသည်. ဒေတာအားမကောင်းခဲ့ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ခြေရှိနေပါသည်.
တစ်ခုသတိရပေးရမှာကတော့ NFPထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ သောကြာနေ့တွေမှာ အလှုပ်အခတ်အလွန် ကြမ်းလေ့ရှိသည့်အတွက် USDကိုရောင်းဝယ်ရာမှာ သတိထားေ၇ာင်းဝယ်သင့်ပါသည်!